Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: DHAAMSA KAABINEE BULCHIINSA OROMIYAATIIF
DHAAMSA KAABINEE BULCHIINSA OROMIYAATIIF.
(Yaya Beshir/Boruu Barraaqaa irraa)
Xiqqaatus guddatus carraaqqiin of taatanii dubbachuuf godhaa jirtan jajjabeessaa fi kan seenaa OPDO keessatti isa duraa tahee dha. Haa tahu malee ammas taanaan ummanni isin amanuuf rakkata. Sababni isaas, Warri TPLF arraba damma isin dibanii ummata sirnicha irratti muratee ka'e kana qabbaneessanii gad teessisuufi jedhee shakkaa jira. Haa tahuutii wanni amma haasawaa jirtan taakkuu takkas taatus mirga Oromoo fuulduratti buta malee of duuba hin deebisu waan taheef deeggaramaa dha.
Garuu gaaffii as irratti ka'utu jira. Sabboonummaan isin irraa calaqqisaa jiru kun itti fufiinsummaa qabaachuuf wabiin isaa maali? Yoo boru warri TPLF kaatee isin doorsiftee afaan isin qabuu barbaadde maaliin of irraa dhorkitu? Yoo isin hidhuu murteeffatte humna kamiin of irraa ittiftu? Yoo isin tarkaanfii Oromoodhaaf malu fudhannaan tarkaanfii sana gufachiiftee inumaa of duuba deebifte aangoo kamiin karoora kaataniif kana raaw'achiiftu?
Gaaffii kanaaf waan deebii tahu irratti murattanii hojjechuu isin feesisa. Ummanni waadaa isin afaaniin seenaa jirtan dhagahaa jira. Garuu afaan osoo hin taane gochaan akka mirkaneessitaniif barbaada. Mirga dimokraasii, dinagdee fi misooma Oromiyaatiin danqaa tokko malee milkaahuuf aangoo siyaasaa fi waraanaa gahaa of harkatti galfachuu isin gaafata. Akka heeraatti mirgoota qabdan hojiitti hiikkachuuf murattanii hojjechuutu isin irraa eegama. Mana Maree federaalaa keessatti sagalee caalmaa qabdan san yoo hojiitti hiiktan waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Kaabinee misnsterootaa keessatti iddoon Oromoo akkuma lakkoofsa isaatti murteessaa akka tahuuf hojjechuu feesisa.
Humna Ittisa biyyattii keessatti Oromoon akka wayyabummaa isaatti wakkalamuu akka qabutti qabsaayuu qabdan. Caasaan humna ittisaa kan amma jiru kan Tigroonni ajajoo tahanii Oromoo fi ilmaan saba biroo ajajamoo tahuun hiriiran diigamee ilmaan Oromoo EJJENNOO KEESSAN QOODDATAN akka qondaalummaa waraanaa sadarkaa gurguddaatti muudaman dhiibuu barbaachisa. Poolisa Oromiyaa sirriitti bajata gahaa ramaddaniifii hidhachiisuudhaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf waardiyyaa akka dhaabbatu gochuutu isin irraa eegama. Humna Dafee Dhaqqabaa duraan tures bakkatti deebiftanii bajata gahaadhaan cimsitanii jaaruun humna dabalataa Oromiyaadhaaf horuun barbaachisaa dha.
Gama biraan biyyattii sana keessatti akka Oromootti kan humna beektota isaa kasaare hin jiru. Ilmaan Oromoo rakkoo siyaasaaf jecha sirna sana baqatanii alatti bahan akki itti wabii nageenya isaanii amansiisaa argatanii isin wajjin hojjetan uumuun barbaachisaa dha. Ejjennoon keessan ejjennoo diinota deeggaru tahuun hafee ejjennoo Oromiyaa fi Oromummaaf quuqamu yoo tahe isinii fi sabboontota Oromoo biyyaa bahan gidduutti riqichi cimaan jaaramuu qaba. Kun hayyama TPLFiin osoo hin taane isin akka naannoo Oromiyaatti aangoo siyaasaa fi waraanaa amansiisaa yoo harkaa qabaattan qofa milkaawa.
Yoo isin jabaataa deemtan ummata miliyoonota lafa sochoosaa bahe san hundatu isin waliin hiriira. Gaafas isin akka OPDOtti TPLF jalatti hirkachuun hafee TPLFtu lubbuuf jedhee isin jalatti hirkachuuf dirqama. Gaafa san ''Qabbanaahu harka, gubu fal'aana'' jettanii itti mammaakuuf onnee horattu.
Posted by Hasan Ismail at 12:55 PM